राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले किन रोज्यो आन्दोलन?, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले किन रोज्यो आन्दोलन?
काठमाडौं। संविधानसभाले जारी गरेको संविधानप्रति असन्तुपष्टि जनाउँदै विगतमा पनि लामो आन्दोलन गरेको राजपा फेरि आन्दोलनको तयारीमा जुटेको छ। त्यसको सुरुवात शुक्रबार (आज) आफ्नो संगठन भएका जिल्लामा विरोध प्रदर्शन र कोणसभा गरेरे हुँदैछ।
संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको राजपाले यही संविधानमा टेकेर निर्वाचनमा भाग लिनुका साथै दुई नम्बर प्रदेश सरकारमा पनि सहभागी भएको छ। यद्यपी राजपाले संविधान संशोधनको मुद्दा भने छोडेको छैन।
मधेस तथा थरुहट आन्दोलनको सम्पूर्ण घटनाबारे छानबिन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७३ असोज २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वमा न्यायिक छानविन आयोग गठन गरेको थियो।
आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन देउवा नेतृतवको सरकारलाई २०७४ साल माघ २९ गते बुझाएपनि सरकारले उक्त प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन। राजपाले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै विगतमा संसदसमेत अवरोध गरेको थियो। सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने आश्वासन दिएपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दै संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो।
‘सरकारले संसदमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो,’ राजपा महासचिव केशव झाले भने, ‘तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी सरकारले संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्यो। यसले के देखाउँछ भने सरकार आफ्नो प्रतिवद्धताप्रति प्रतिवद्ध छैन।’
राजपाले विशेष गरी संविधान संशोधन, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, मधेस आन्दोलनका पक्राउ परेकालाई रिहा गर्नुपर्ने तथा कैलालीबाट निर्वाचित रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएको छ। तर कैलाली जिल्ला अदालतले कैलाली घटनामा संलग्न भएको भन्दै चौधरीले जन्मकैदका फैसला सुनाएको छ।
राजपाले आफ्ना माग सम्वोधन गर्ने आशासहित वर्तमान सरकारलाई बाहिरै बसेर समर्थन गरेको थियो। तर सरकार आफूहरुको माग सम्वोधन गर्न संवेदनशील नभएको भन्दै राजपाले फागुन २२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। सरकारलाई दिएको समर्थन फिता लिएपछि आन्दोलनमा जान राजपालाई कार्यकर्ता तहबाट दबाव आएको थियो। तर, राजपाले तत्काल आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको थिएन।
तर बुधबार बसेको अध्यक्ष मण्डलको बैठकले शुक्रबार आफ्नो संगठन भएका स्थानमा विरोध प्रदर्शनसहित कोणासभाको आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। यसैगरी राजपाले बैशाख पाँच गते बृहत अन्तरक्रिया गर्ने जनाएको छ। सरोकारवाला समूहसँग छलफल गरेर त्यसबाट निस्किने निष्कर्षका आधारमा आगामी रणनीति तय गरिने राजपा महासचिव केशव झाले बताए।
जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनुपर्ने, भ्रष्टाचारी, कालोबजारी नियन्त्रण गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय अखण्डता र एकतालाई बलियो बनाउनु पर्नेलगायतका माग अघि सारिएको महासचिव झाले बताए।
‘हामीले सुरुमा सदनबाट नै माग पूरा गराउने प्रयत्न गर्यौं,’ उनले भने, ‘सदनबाट संभव नभएपछि सडकमा आएका छौं।’ सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि कार्यकर्ताले नेतृत्वलाई सडक आन्दोलनमा आउन दबाव दिएका थिए। तर यो बीचमा राजपा आफ्नो सांगठानिक काममा व्यस्त भयो। यही बीचमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो।
तर तत्काल महाधिवेशन हुने संभावना भने टरेको छ। कतिपयले भने समयमै महाधिवेशन गर्न नसकेपछि राजपाले कार्यकर्तालाई भुलाउन आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको टिप्पणी गरेका छन्।
तर महासचिव झा यो मान्न तयार छैनन्। उनले महाधिवेशन गर्नकालागि मुल तयारी संयोजक समिति नै गठन भइसकेको अवस्थामा महाधिवशेन हुनेमा शंका नगर्न उनले आग्रह गरे। यद्यपी महाधिवेशनको मिति भने तय भएको छैन
राजपाले बैशाख ७, ८ र ९ गते महाविधेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। महाधिवेशन मिति तय भएको ९ महिना भइसक्दा पनि साधारण र सक्रिय सदस्यता वितरण हुन सकेको छैन। तोकिएको अवधिभित्र सदस्यता वितरण भइहाले पनि वडा, क्षेत्रीय र प्रदेश अधिवेशनका लागि समय नपुग्ने राजपा नेताहरूको भनाइ छ। राजपाको नेताहरु विच नै अविश्वास संङखा पैदा हुँदा महाधिवेशनको टुङगो लाग्न नसकेको हो।